bacaha Baakadaha Non-leh tolmo wanaagsan yihiin bacaha oo dhar non-leh tolmo wanaagsan, kuwaas oo guud ahaan loo isticmaalo articles baakada ama ujeedooyin kale dhigay. Waa nooc ka mid ah dhar non-leh tolmo wanaagsan oo la sameeyey by si toos ah iyadoo la isticmaalayo chips polymer sare, fiiloyin gaaban ama filaments si ay u sameeyaan fiiloyin by socodka hawada ama shabaqa si farsamaysan.
Miisaanka uu leeyahay bacaha Baakadaha non-leh tolmo wanaagsan ay la mid tahay in bacaha warqad caadi ah iyo bacaha balaastikada ah, laakiin waxaa la jecel cid walba sababtoo ah practicability, sharraxaadda iyo ilaalinta deegaanka ay.
Tan iyo markii la sii daayo si caag ah xadka, bacaha balaastikada ah ayaa si tartiib tartiib ah laga saaray suuqa baakada iyo bedelay bacaha non-leh tolmo wanaagsan. bacaha Non-leh tolmo wanaagsan waxaa loo isticmaali karaa si joogta ah ma aha oo kaliya, laakiin sidoo kale daabacan ee nidaamyada iyo xayeysiis. Waxaa la isticmaalin karaa heerka qiimo jaban, kaas oo la badbaadiyay ma aha oo kaliya kharashka, laakiin sidoo kale keentaa faa'iidooyinka advertising.
bacaha shopping dhaqanka iftiin, jilicsan yihiin oo lagu badbaadinayo si costs.In si ay u xoog badan, waxaa lagu bixiyaa lacag. bacaha shopping Non-xidhka daabaca xal u heli karo dhibaatadan iyadoo qalleyf wanaagsan iyo ma fududa in ay jebiyaan. Intaa waxaa dheer in ay karaamo, waxa kale oo uu leeyahay astaamaha biyuhu, dareen gacanta wanaagsan iyo muuqaalka wanaagsan. Inkasta oo qiimaha waa heer sare ah, nolosha adeeg waa mid yara dheer.
Bacda A qurux non-leh tolmo wanaagsan ma aha oo kaliya badeecadaha a. muuqaalka fiican waa jeclaan karo, iyo waxa ay sidoo kale waxa loo badali karaa boorso garabka moodada oo fudud a, kaasoo noqda muuqaal ah oo qurux badan. Sifooyinka heleen adayg, iska caabin ah oo biyo iyo gacan-ku nqoday sidoo kale doorashada koowaad ee macaamiisha. Intaa waxaa dheer, calaamadaha ama xayaysiisyada laga daabacan karaa on bacaha non-leh tolmo wanaagsan si ay u abuuraan saamayn advertising ah.
Si ay u xaliyaan dhibaatooyinka deegaanka, amar xad caag ah ayaa la soo saaray. Isticmaalka soo noqnoqda ee bacaha non-leh tolmo wanaagsan ayaa si weyn hoos u cadaadiska diinta qashinka, si qiimaha iman kara aan la badalay lacag, iyo waxa ay xal u heli karo dhibaatada in Baakadaha caadiga ah ma aha si fudud u yaraadeen.
midayso oo dhumucdiisuna
In deegaanka iftiin, farqiga u dhumucdiisuna waxay of dhar wanaagsan ma noqon doonto mid aad u ballaaran. Laakiin dhar miskiinka muuqan doonaa mid aad u sinnayn iyo duwan texture ee dhar ah uu noqon doono weyn. Tani waxay si weyn hoos u dhigi doontaa awoodda load dhalista ee dhar ah. Isla mar ahaantaana, dhar la dareenka gacantiisana masaakiinta dadka dareemaan aad u adag oo aan jilicsan.
In si loo yareeyo kharashka, qaar ka mid ah waxyaabaha dib loo isticmaali iyo tiro u dhiganta Asagoo arigtadaa ka wakiilka yihiin ku daray in ay alaabta ceeriin, si dhar ah soo saaray ma aha xoog xoog siligga oo ay adag tahay inuu ka soo kabsado. Waxa uu dareensan yahay sida dhar noqon doonaa dhumuc weyn iyo hanashada, laakiin aan ka jilicsanaayeen. Xaaladdan oo kale, awoodda load-dhalista ah waa miskiin, oo kala daatay ee dhib badan oo aan bay'adda u noqon doonaa.
Bag awoodda dhalista
Miisaanka uu waday oo kiishka ku leedahay wax badan oo la sameeyo iyada oo xoogga siligga, barti, iyo kala dheereynta line iyo line mid ah waxyaabaha bacda. Waxaan qaataan keeno qalabka bay'adda u fiican, khadka wuxuu qaadanayaa 402 thread suuf saafi ah, oo kala dheereynta line waa adag iyadoo la raacayo masaafada of hal inji iyo shan iyo cirbadaha, si loo hubiyo miisaanka waagii bacda.
Haddii screen daabaco istawooday ma kifaaxnay, haddii la jiido di'in, haddii xoogga shaqaalaha daabacaadda ma aha xataa marka xoqid khad, ku nafwaayay miskiinka of koollada waxay keeni doontaa in saamayn daabacaadda cadda.